ဒေါ်နန်းအိစံနှင့်ဂေါ်လီရဲရဲ – Grab Love Story
ဒေါ်နန်းအိစံသည် သူမခင်ပွန်းစားရန်အတွက် ညနေစာကို သူမကိုယ်တိုင်စီစဉ်ချက်ပြုတ်နေလေသည်သူမ၏ အသက်မှာ ၃၉ နှစ်ဖြစ်ပီး ခင်ပွန်းသည် ကိုဝင်းမြင့်က အသက်၄၅ဖြစ်ကာ သူမထက် ၆ နှစ်ခန့်ကြီးသည်ကိုဝင်းမြင့်ကတော့ တနေကုန် သူ၏ အလုပ်ထဲမှာပင်ရှိရာ အလုပ်နှင့်သာ ၁၂ ရာသီ နား ပန်းလုံးနေသဖြင့်သူမတို့ လင်မယားသည် ၂ပတ်လောက်နေမှ သာ တစ်ကြိမ် လိင်ဆက်ဆံဖြစ်သည်သူမတို့ရခါစကတော့ တစ်နေ့ထဲကို ၅ကြိမ်လောက်ဆက်ဆံကြသည်တဖြေးဖြေး အိမ်ထောင်သက်ရလာတော့ သူမခင်ပွန်းသည် အလုပ်နှင့်သာ နပန်းလုံးနေတော့ သူမသည်ကြာတော့ မိမိလက်နဲ့သာအာသာ ဖြေခဲ့ရတာများပေသည်သူမသည် ရှမ်းမတစ်ယောက်ဖြစ်၍ အသားရေလှကာအရပ်လည်း ၅ ပေ ၇ လက်မလောက်ရှိပီး သူမ၏ရင် ၃၆ ခါး ၂၈ တင် ၃၉ တို့ရှိလေသည်။
ထိုသို့ရှိအောင်လည်း နေ့စဉ်မပြတ် သူမ၏ အိမ်မှာပင် Gymကစားပေသည်သူမကို ခလေးတစ်ယောက် အမေ အသက် ၃၉ နှစ်ဆိုလျှင် မည်သူမျှ မယုံနိုင်ကြပဲ အသက် ၃၀လောက်ဟုပဲပြောကြလေသည်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရလျှင် သူမသည် အတော်ပင်ကိတ်သည်ဟုပြောရပါမည် သူမမှာ အဖော်ဆို၍ ခင်ပွန်းသည် ခေါ်ပေးထားသော လက် တိုလက်တောင်းခိုင်းရန် ရဲရဲ တစ်ယောက်သာရှိပြီး သားသမီးအဖတ်မတင်သော ဒေါ်နန်းအိစံ အတွက် ရဲရဲ ကိုသာ မနက်မိုးလင်းကမိုးချုပ် ခင်တွယ်စရာအဖော်အဖြစ် သတ်မှတ်နေရပြီး
ထိုကြောင့် နန်းအိစံ စိတ်အတွင်း၌ကား သူမ၏လိုအပ်နေရသော လိုအင်ဆန္ဒအတွက် ရဲရဲ ကိုအသုံး ချရန် ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကြံစီလုံးပမ်းနေခြင်းကိုကား ရဲရဲ တစ်ယောက် မသိရှာ။နန်းနန်းရေ ရဲရဲ ပြန်ရောက်ပီဟုသူမ ကိုပြောကာ သူမ၏အနီးမှဖြတ်ရှောက်ကာ သူ၏အခန်း အတွင်းသို့ဝင်မည်ပြုစဉ် ရဲရဲ ရေ နန်းနန်းတို့ ထမင်းစားမယ်ဟု ပြောလိုက်၍ ရဲရဲ ဘက်သို့သူမလှည့်ကာ ရဲရဲ၏ အရပ်မြင့်မြင့်ကြီးအား သူမခြေဖျားလေးထောက်၍ ရဲရဲ ၏ နဖူးလေးအား ကြင်နာစွာနမ်းလိုက်လေသည် ရဲရဲလည်းအိုးတို့အန်းတန် ဖြစ်ကာ နန်းနန်း၏မထင်မှတ်သောအပြုအမူကြောင့် အံဩသွားလေတော့၏၊ရဲရဲ လည်းခုမှ နန်းနန်းအား သတိထားကြည့်မိရာ သူမသည် အတော်ကိတ်ကြောင်း ကိုတွေ့ရသည်။
ရဲရဲ ကလည်း အံဩနေရာမှ နန်းနန်းကို နန်းနန်းနောက်ကျောဘက်မှပြန်၍ဖက်လိုက်လျှင်နန်းနန်း၏ ဖင်ကြီးများနှင့် သူ လီးထိမိနေသော နေရာကားနန်းနန်း၏ ဖင်ကြားကျကျထောက်မိနေကြောင်းအာရုံဖြင့်သိလိုက်သော အခါ ရဲရဲ၏ လီးကားကြီးသထက်ကြီးမားလာပါတော့တယ်
ထိုသို့ ရဲရဲ လီး တောင့်လာတာကို အိမ်ကြီးရှင်ဒေါ်နန်းအိစံတစ် ယောက် သိလိုက်ရသည်အတွက် အပြုံးပါးပါးတစ်ခု ဟန်ပါပါ ပြုံးလိုက်ကာ ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမသိမသာလူးလွန်ကာ လူခြင်းခွာလိုက်ပြီး ထမင်းစားပွဲခုံဘက်သို့လှည်ထွက်သွား လိုက်သဖြင့် ရဲရဲ မှာခိုးလို့ခုလုဖြစ်ကျန်ခဲ့လိုက်ရ၍အနီးဆုံး ရေချိုးခန်း တံခါးဖွင့်ပြီးခပ်မြန်မြန်ပြန်ပိတ်ပြီးသူမအိုးကြီး အား မှန်းကာခပ်မြန်မြန်ဂွင်းထုလိုက်မှလရေများ ပန်းထွက်ကုန် မှ နေသာထိုင်သာရှိသွားသည်။ပြီးလျင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး အပြင်ထွက်ပြီးနန်းနန်းနှင့်အတူညစာစားကြသည်။နန်းနန်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဝင်းမြင့်ကတော့ အလုပ်များလို့ဟုနောက်ကျ မည်အကြောင်း ဖုန်းဆက်ကာပြောသည်။
ရဲလွင်ဦးကားဤအိမ်မရောက်မှီကတည်းက သူ့သူငယ်ချင်း များနှင့်အတူ သူ့လီးတွင် ဂေါ်လီအပေါ်တစ်လုံးအောက်တစ်လုံးထဲ့ထားသည်သူ၏ လီးမှာလည်း ဆွဲစက်နှင့်လည်းမကျင့် ကြီးဆေးမထိုးပဲကို အော်ရီဂျင်နယ် ၈ လက်မအရှည်ရှိပီး လုံး ပတ်က လက်တစ်ဆုပ်စာမကရှိလေသည် ရဲရဲ တစ်ယောက် နန်းနန်းကိုကြည့်ကာတအားလိုးချင်လာမိသည်သူမသည် တခါတရံ ဘရာမပါပဲ အင်းကျီ အပါးလေးနှင့်သာ အိမ်မှု ဘာရီယများလုပ်နေလျှင် သူသည်သူမ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ကြည့်နေတတ်ပါသည်ရဲရဲလည်း နန်းန်းနန်းနှင့်အတူထမင်းစား အပြီး အခန်းအတွင်းဝင်ပြီးဖုန်းထဲက အောကားများကြည့်နေရာ သူ၏ ဘောင်းဘီအတွင်းမှ လီးမှာလည်း ဒုတ်ချောင်းအလား မာတောင်နေသဖြင့်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဂွင်းထုရန်အပြင်ပြန် ထွက်လိုက်ရာ နန်းနန်း တစ်စ်ယောက်ကုန်းကုန်းကွကွဖြင့် တခုခုရှာနေသည့်ပုံ သူမနားသွားကာနောက်မှသူမဖင်ကြီးနှင့် သူ့လီးမှာ နီးကပ်နေပေသည်သူမက ကုန်းနေရာမှ ထလိုက်သည်နန်းနန်း ဘာရှာနေတာလဲဒီမှာ ဇွန်း ကျလို့ကောက်နေတာ ရဲရဲ ရဲ့ဟုပြန်ပြောလိုက်ပီး သူမသွားရန် ခြေလှမ်းလိုက်သည် ခဏလေး နန်းနန်းဟုဆိုကာသူ့မ၏ခါးလေးအားလက်ဖြင့်သိုင်းဖက်၍ သူ့လီးတောင်တောင်ကြီးနဲ့ သူမဖင်ကြားသို့ ထမီပေါ်မှ ထောက်ကာဖိပီး အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲနေပါသည်။
နောက်မှ ရဲရဲ ၏လီးကြီးနှင့် သူမဖင်ကို ပွတ်ဆွဲနေကြောင်းကိုသိသော်လည်း သူမ အဖုတ်တွင်း မှ စောက်ရည်ကြည်လေးများပင်စိမ့်ကာထွက်နေလေတော့ အရသာရှိသဖြင့်သူမ ရဲရဲ လုပ်သည်ကို မသိဟန်ပြုကာနေလိုက်သည်သူမသည် ကာမလိုအင်ကလည်းမပြည့်သောကြောင့် ရဲရဲ ဖြစ်သူကို ခုလို မလုပ်သင့်ကြောင်း တားရမည်ဖြစ်သော်လည်းသူမမတားပါ လိုလိုချင်ချင်ကိုရဲရဲ လုပ်သည်အား ခံယူနေမိပါသည်၊ ရဲရဲ သည် နန်းနန်း ထမီအား ချွတ်လိုက်ရာ သူမခြေဖျားသို့ ရောက်သွားပီး သူမ၏ ဖင်ကြီးများကြားမှ အဖုတ်ပြူ တစ်လေးမှာ နောက်သို့ ပြူထွက်လာလေသည် ရဲရဲ လည်း သူ့ဘောင်းဘီတိုကို အောက်သို့ ချွတ်လိုက်ပီးသူမကျောအား လက်ဖြင့်ဖိချလိုက်ကာ သူမရှေ့ရှိစားပွဲခုံ အားလက်ဖြင့်ထောက်စေကာ သူလီးနှင့် သူမ အဖုတ်ဝသို့ တေ့ပီးလိုးချလိုက်ပါသည် စွိ ဖွတ် ဘလွတ် ဘွစ်အို့ ရဲရဲ မှားမယ်နော် နန်းနန်း ကို အဲလိုမလုပ်ရဘူးဟုသူမက ပြောပီး သူမ ဖင်ကြီးအား ရဲရဲဘက်သို့ ပစ်ကာ ဆောင့်ပေးနေလေသည်ရဲရဲ ကတော့ ဘာမှမပြောပါ သူမ၏ ခါးလေး နှစ်ဖက်အားဆုပ်ကိုင်၍ အတင်းကြုံးလိုးနေ သည် ဘွစ် ဘလစ် တစ် တစ်… ဒုတ် အ အင့် အမေ့…အား..သူ၏ ဂေါ်လီများက စောက်စိကိုခလုတ် တိုက်နေ၍ သူမအော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ရဲရဲ သည် သူ့လီးကို ဂေါ်လီထဲ့ထားသည်ဆိုတာ သူမသိလိုက်ပါသည် နာပေမယ့် ခံလို့ကောင်းသောကြောင့် သူမ နှုတ်ခမ်း လေးကိုက်ကာခံနေလိုက်သည်ပုံမှန် လေးပဲ ၁၅မိနစ်လောက် လိုးပေးနေရာ ခဏအကြာတွင် နန်းနန်းပြီးသွားလေသည်သူလည်း အချက် ၅၀ ကျော် ဒလစပ်ဆောင့်လိုး ပီးသူမ၏ အဖုတ်နံရံသို့ သူ့ လရေ များပန်းကာ ပီးသွားလေသည်
နန်းနန်းကို သူ့ဘက်သို့ ဆွဲလှည့်ကာ သူမ နှုတ်ခမ်း လေးအား နမ်းနေလိုက်သည်နန်းနန်းက လုပ်တာကလည်း လမ်းဘေးက အပျက်မတွေကို လုပ်သလိုလုပ်တယ် နန်းနန်းအဖုတ်ကိုကြိမ်း သွားတာပဲဆောရီး နန်းနန်း ရယ် ရဲရဲလဲလိုးချင်ဇောနဲ့လောသွား တာပါဟု သူမ ပါးလေးအား နမ်းကာပြောလိုက်ပီးနန်းနန်း ကိုယ်လုံးအား ပွေ့ချီကာ သူ့ အခန်းသို့ ခေါ်လာပီး အိပ်ယာ ထက်တွင်ညင်သာစွာချပေးလိုက်သည်။၁၀မိနစ်လောက် နားပီး သူမ၏ ပေါင်ကြားသို့ဒူးထောက်ကာ ဝင်၍အမွေးများမရှိပဲပြောင်ရှင်းနေသော နန်းနန်းဖြစ်သူ ၏ အဖုတ်ကြီးအားသူ ကုန်းယက်ကာအစိလေးကို လျှာဖြင့် ကလော်ထိုးလိုက်သည် အ ရှီး ကျွတ် စ် ကောင်းလိုက်တာ ရဲရဲ ရယ် မင်း ဦးလေးက ခုလို တခါမှ မလုပ်ပေးဖူးဘူးဟုသူမကသူ့ကိုပြောလိုက်သည် သူမကို စေတနာတွေ ဒလဟောဖြင့် ယက်ပေးနေရာသိပ်မ ကြာလိုက် သူမ အဖုတ်တွင်းမှ စောက်ရည်များသူ့မျက်နှာ သို့လွင့်စဉ်ပန်းထွက်ကာ သူမပီးသွားပါသည်စောက်ရည်များ ကို အကုန်မြိုချကာ နှုတ်ခမ်းတွင်ပေနေသော လက်ကျန်အရေများကို လျှာဖြင့် သပ်လိုက်ပြီး မြိုချလိုက်လေသည် နန်းနန်းက သူ့ခေါင်းလေးအားသပ်ကာ သူ့ပါးလေးအားနမ်း နေလေသည် သူမသည် သူ အိပ်နေရာ ဘေးသို့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ကာ ခါးလောက်ရှိသည့် သူမဆံပင်ရှည်တွေကို ကလစ် ဖြင့် စည်းနှောင်ကာ သူမပါးစပ်လေးဖြင့် သူ့လီး ကြီး အားစုပ်ပေးနေလေသည်ပြလွတ် ပြလွတ် လီးစုပ်သံများမှာ အခန်းတွင်း ဝယ်သာယာသော ဂီတသံလိုပင် ထွက်ပေါ်လျက်ရှိလေသည်လီးကြီးကို သူမပါးစပ်မှ ထုတ်ကာ လက်လေးဖြင့် ညင်သာစွာ ဂွင်းထု ပေးနေလေသည် ရဲရဲလီးကြီးက အာကြီးကြီး ပဲ ရှည်လည်းရှည်တယ်လီးထိပ်ဒစ်မှာ လည်း ဂေါ်လီ၂လုံးနဲ့ဟု နန်းနန်းက ကျေနပ်အားရစွာ ပြောနေပါသည်သူ့ဒစ်ပေါ်သို့ သူမက စတွေးများထွေးချပီး တစ်ချက်နှစ်ချက် ထုပေးနေပီးပက်လက်လှနိ ပေါင်ကားပေးပီး လာလိုးပေးတော့ရဲရဲ နန်းနန်းစောက်ဖုတ်အထဲကယားကျိကျိဖြစ်နေပီဟု သူ့ကိုပြောလိုက်သည်နန်းနန်း ပေါင်ကြား ဒူးထောက်ကာ အစိလေးကို ဒစ်ကြီးနှင့် အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲပီးမှ အဖုတ်ထဲ သို့တေ့ကာ ဆောင့်ပြီးလိုးချလိုက်သည် ဘွတ် ဖတ် ဖွတ်၁၅မိနစ်လောက် ဆောင့်လိုးလိုက်ရာ သူမ ပီးသွားသည်
ခုနက တချီလိုးပြီးထားသောကြောင့် ဒီတချီ တွင် သူအချိန်ဆွဲကာလိုးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည် သူမ၏ နို့၂လုံးအား စုပ်ကိုင်ကာ တဖုံးဖုံးနှင့် ဆောင့် လိုးနေရာ ၁၀မိနစ်လောက်ရောက်သောအခါ သူမ အဖုတ်ထဲ သို့ သူ့သုတ်ရေများ ပက်ဖျန်းကာပီးသွား ပြီး သူမလည်း နောက်တကြိမ်ပြီးသွားလေသည် သူတို့ ၂ ယောက်လိုးပြီးကြ၍မောကာ အိပ်ယာထက် တွင် ၂ နာရီ လောက် အိပ်ပျော် သွားပြီးနိုးလာတော့ အားပြန်ပြည့်လာကာဒေါ့ကီ ဆွဲလိုက်ကြသည် ရေချိုးခန်း ဝင်ကာ သူတို့၂ယောက်ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့်အိပ်ရာ ခုတင်အထက်မှထကာရေချိုးကြပီး ညစာစားပြီး ဧည့်ခန်းတွင်ထိုင်ကာ tvကြည့်ရင်း ဦးလေးပြန်အလာကိုစောင့်နေကြသည် သူမ ပခုံးလေးအားပွတ်သပ်နေပီး သူ့လက်များသည် တဖြေးဖြေး သူမ၏ တင်ပါးကြားသို့ ထမီပေါ်မှလက်ဝါးဖြင့် ပွတ်နေလိုက်သည် မင်း ဦးလေး ပြနိလာခါနီးပီ ရဲရဲ မလာသေးပါဘူး နန်းနန်း ရဲ့ညနက်လောက်မှပြန်လာမှာပါ ဒီမှာ ရဲရဲ တအားတင်းနေပီဟုသူ့ပုဆိုးကို လှန်ပြလိုက်ရာ သူ့လီးကြီးမှာ မိုးထောင်ကာတောင်မတ်နေသည် အာ့ ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဟု နန်းနန်းက သူ့အား ပြုံးကာပြောပီး သူ့လီးကြီးအား သူမလက်လေးဖြင့် ညင်သာစွာ ဂွင်းထုပေးနေပီး ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်လေသည်သူမ၏ထမီကိုလည်း ချွတ်ချပစ်သည်ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်နေသော သူ့အပေါ်မှ တက်ခွ၍ သူ့လီးကြီးအား လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ပီး သူမအဖုတ်ဝနှင့်တေ့ကာထိုင်ချလိုက်သည် ဘလစ် တစ် တစ် ဘွစ် ဖွတ် ဒုတ် အ ကျွတ် ကျွတ် စ်နန်းနန်း၏နှုတ်ခမ်း လေးအားစုပ်ကာ အောက်မှ ပင့်ကာ လိုးနေလိုက်သည်ခဏကြာတော့ သူမကို ဆိုဖာပေါ်လက်ထောက်ကုန်းစေကာ နောက်မှ သူမ၏သေးကျဉ်သော ခါးလေး ကိုင်ကာ ဆောင့်လိုး နေလိုက်သည်၁၀မိနစ်လောက်မနား တမ်းဆောင့်လိုးလိုက်ရာသူကော သူမပါ ကာမပန်းတိုင်ကိုပြိုင်တူတက်လှမ်းရောက်ရှိသွားလေသည်အဝတ်အစားများ ပြန်ဝတ်ပြီးမကြာခင် ပွမ် ပွမ်ဟုဦးလေးကားသံကြားသဖြင့်
သူ ခြံတခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်သည်သူမသည် အဝတ်များကိုဆွဲ ဆန့်ပီး ထိုင်နေလိုက်ပါသည်နန်းနန်းနှင့် သူလိုးနေကြတာ ဘာလိုလိုနှင့် ၂လပင်ကျော်လာပြီဖြစ်သည်သူတို့အဖြစ်ကို ဒေါ်နန်းအိစံ၏ခင်ပွန်းမှာမသိရှာပေသူမကတော့ ရဲရဲ၏ ဂေါ်လီလီးကြီးအား စွဲလန်းသွားပီး ညဘက် သူမ ခင်ပွန်း အိပ်ပျော်နေသည့်အချိန်ဆို ရဲရဲ အခန်းသို့သွားကာ အလိုးခံလေသည် ရဲရဲကလည်း သူမအား တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၃ချီတော့ လိုးပေး ပါသည် နောက် ၁ ပတ်လောက်ကြာသောအခါတွင် သူမ၏ အမျိုးများရှိရာ တောင်ကြီးသို့ သွားရန် ခင်ပွန်းသည် အားပြောရာ သူကတော့ မလိုက်နိုင်ဘူး အလုပ်မအား၍ ရဲရဲ ကိုအဖော်အဖြစ်ခေါ်သွားကြဟုဆိုသဖြင့် ရဲရဲ နှင့်အတူ ဒေါ်နန်းအိစံတစ်ယောက် ပျော်ပျော်ကြီးအိမ်ကကားနှင့် တောင်ကြီးသို့လာခဲ့ကြလေသည် တောင်ကြီးသို့မရောက်ခင် မန်းလေး၌ ညအိရန် ဟော် တယ်သို့လာခဲ့ပီး ၂ ယောက်တစ်ခန်းယူကာ အခန်းထဲ သို့ဝင်ကြပီး ရေချိုးခန်း၌ အတူချိုးကြလေသည် ညားခါစလင်မယား ဟန်းနီးမွန်း ခရီးထွက်လာသလိုပင် ရေချိုးပီး ကုတင်ပေါ်၌ ထိုင်ကာ သူကောသူမပါ ကိုယ်ပေါ်မှ သဘက်ကြီးအား ချွတ်လိုက်ပြီး တစ်ယောက်နှင့် အပြန်အလှန် နမ်းလိုက်ကြသည်၅မိနစ်ကျော်လောက်နမ်းပီးတော့ 69ပုံစံဖြင့် နန်းနန်းကသူ့လီးကြီးအား လွေပေးကာ သူက နန်းနန်း၏အဖုတ်ကြီးအား ဂျာပေးနေလေသည်အတန်ကြာ ဂျာပေးလွေပေးပြီးတော့ သူမ၏ ပေါင်နှစ်ဖက်အား သူ့ပခုံး ပေါ် တစ်ဖက်တစ်ချက်ထမ်းတင်၍သူမ အဖုတ်ထဲသို့ သူ့ လီး ကြီးကိုစိုက်ချကာ လိုးဆောင့်နေုလိုက်သည် ဘွတ် ဖတ် ဘလွတ် ပလောက်….ပလောက် ဘွစ် ဘလစ်…. အ အမေ့ အ ဟင်းကောင်းတယ်…. ရဲ…. နန်း ကို ဆောင့်လိုးကြမ်းကြမ်းလေးလိုးပေး အသူမသည် ပါးစပ်မှလည်းအော် ငြီးကာ ဆောင့်လိုးခိုင်းနေသဖြင့် သူလည်း နန်းနန်း၏ အဖုတ်ကြီးကို အဆက်မပြတ် တဖုံးဖုံးနှင့် ဆောင့်လိုးရာ ခဏအကြာတွင် သူမ အပေါ်သို့ မြောက်တက်ကာ အင်း ဟင်းးဟုတိုးတိုးလေး ငြီးကာ ပီးသွားလေသည်သူလည်း အချက် ၇၀ ကျော်လောက်ဆောင့်လိုးကာသူမအဖုတ်တွင်း
နံရံများသို့ သူ့ သုတ်ရေများကိုပန်းထုတ်၍ပီးသွားပါသည် မိနစ်၂၀လောက် နားပီးတော့ သူမ၏ နို့နှစ်လုံးအား သူစို့ပေးနေပြီး စောက်ဖုတ်ကြီး အား သူ့ လက်ဝါးဖြင့် ပွတ်ပေးပီး အစိလေးအား ခြေလိုက်သည်စောက်ရည်ကြည်လေးများပင်စို့ထွက်လာသည်တော်ပီ ရဲလေးရယ် နန်းနန်းကိုလိုးပေးတော့ခံချင်နေပြီလေးဘက်ကုံးလိုက် နန်းနန်း ရဲရဲ နန်းနန်းအိုးကြီးကိုကြည့်ပီး ဒေါ့ကီဆွဲချင်လို့ဟု ဒေါ်နန်းအိစံအားပြောလိုက်ရာ သူမက တဖက်သို့ လှည့်ကာကုန်းပေးလေသည် သူမ ၏ ခါးလေးအား လက်ဖြင့်ဖိလိုက်ရာ အောက်သို့ ညွတ်ကျကာ ခါးလေးခွက်ဝင်သွားသောကြောင့်သူမဖင်ကြီးမှာ အပေါ်သို့ ထောင်တက်လာလေသည်နဂိုကမှ နန်းနန်းသည် ဖင်ကြီးသူမို့ ယခုလို ခါးခွက်ကာကုန်းလိုက်တော့ အိုးကြီးက ကား ထွက်နေသည်သူမ၏ နောက်သို့ မုဆိုးထိုင်ထိုင်ကာ သူမ အဖုတ်ဝသို့ လီးဖြင့်တေ့ကာ လိုးတော့သည် ဘွစ် ဘလစ်…. ဒုတ်…. အမေ့ ကျွတ် ကျွတ် ဖွတ် ဘွတ်….ပလောက် ပလောက်အဆက်မပြတ်ဆောင့်လိုးနေရာ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ သူမ ပီးသွားသည် သူကတော့ နန်းနန်း၏ခါးလေးအားအုပ်ကိုင်ကာ အားရပါး ရပင်လိုးနေသည်လိုးနေစဉ် သူမ၏ ဖင်စအိုလေးထဲသို့ လက်ညှိုးဖြင့်ထဲ့၍ချဲ့နေလိုက်သည်လက်ကလည်းဖင်ကိုလိုး လီးက လည်း အဖုတ်ကိုလိုးနေရာ တပြိုင်နက် သူမ ကာမအရသာကို ခံစားနေရသဖြင့် နောက်တစ်ခါပင်ပီးချင်သလိုဖြစ်လာသည် မိနစ်၂၀ လောက်ဆောင့်လိုးပြီး သူ့လရေများကိုသူမ၏ အဖုတ်ထဲပန်းထဲ့ကာပီးသွားပြီး သူမလည်းပီးသွားလေသည် ရဲရဲ နဲ့ နန်းနန်း နှစ်ယောက်စောင်တစ်ထည်ကို နှစ်ယောက် ခြုံကာ မောမောဖြင့် အိပ်ပျော်သွားကြလေတော့သည်
မနက်ကြတော့အိပ်ယာမှထကာ မနက်စာစားသောက်ကြပီး ကုတင်ပေါ်တွင် သူမအားနှူးနပ်ကာ လိုးရန် သူအစပျိုးနေလိုက်သည် နန်းနန်း ကို ရဲရဲ ဖင်လိုးချင်တယ်နာမှာလား ရဲရဲ ဖင်ကိုလိုးရင်သိပ်မနာပါဘူး နန်းလေးရဲ့မင်း ဦးလေးတောင် နန်းနန်း ကို ဖင်တစ်ခါမှမချဘူးဖင်ခံရတဲ့ အရသာကို ခံစားကြည့်ရတာပေါ့ဟုသူမကပြောလိုက်သည်ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှ အုန်း ဆီဗူးထုတ်ကာပေးလိုက်သည်ရော့ ရဲရဲ လီးမှာကော နန်းနန်းစအိုထဲပါအုန်းဆီစွတ်ပီးလုပ်ဟုဆူကာသူ့အား ပြောလိုက်ပီးသူ့လီးအား သူမလက်ဖြင့် ဂွင်းထုပေးနေပါသည် သူလည်း နန်းနန်း ဖင်ပေါက်ဆီသို့ လက်ခလယ်ဖြင့်ျခဲ့နေ့ပီး လီးလည်းတောင့်လာပီဖြစ်၍ သူမအားကုန်းခိုင်း၍ သူ့လီးကော သူမ ဖင်စအိုဝအတွင်းသိူ့ပါအုန်းဆီဖြင့်စွတ်လိုက်ပီး ဒစ်ဖူးအား ခရေပွင့်လေး အဝမှာတေ့ပီး ထိုးထဲ့လိုက်သည် ဘွတ်..ဖွတ် ….ဘလစ် တစ် တစ်လီးတဝက်လောက်တော့ဝင်သွားလေသည်နန်းနန်း ဖင်ကိုမရှုံ့ထားနဲ့ ရှုံ့ထားရင်နာလိမ့်မယ် ဟုသူ ပြောတော့ သူမ ဖင်ကို မရှုံ့တော့မှ တစ်ချောင်းလုံးချောချူစွာဝင်သွားလေသည်သူမ အံတော့ကြိတ်ထားရသည်
ဂေါ်လီတွေက စအိုနံရံများအားခလုတ်တိုက်သလို ဖြစ်၍ နာကောင်းကြီးဖြစ်ပါလေသည်နန်းနန်း၏ စအိုထဲသို့ ဖြေးဖြေး ချင်းလိုးနေရာမှ တအားကောင်းလာကာ ဖီးတက်လာပီး ဒလစပ်ဆောင့်လိုးနေမိသည် ဘွစ် ဘွတ် ဖွတ် ဘလွတ် အမေ့ အ.. အမလေး ဟင်း..သူမသည် နာ၍ တအားအော်လေသည် သူလည်းမညှာမတာ သူမ၏ ခရေပွင့်လေး အား လိုးချနေရာ မကြာခင်မှာပဲ သူမ၏ ဖင်ထဲသို့ သူ့ လရေများပန်းကာ ပြီးသွားသည်သူမလည်း စောက်ရည်များ ထွက်ကာပီးသွားလေသည်သူမကိုယ်ပေါ်မှဆင်း၍ သူတို့ နားနေလိုက်ကြလေသည် အ ကျွတ် ကျွတ် ရဲရဲ ရယ် နန်းနန်းဖင်များကွဲသွားပြီလားမသိဘူး စပ်လိုက်တာဟုသူမက သူ့အား ပြောလေသည်ခဏနေရင် သက်သာသွားမှာပါနန်းနန်း ရဲ့နောက်မှ ကောင်းလွန်းလို့ နန်းလေးဖင်ပဲလိုးပါ ရဲရဲ ရယ်လို့ ပြောနေမှာဟွန်း လူဇိုးလေး နန်းနန်း မှာရှိသမျှအပေါက်တွေ အကုန်လိုးတယ်ဟု သူအား နှုတ်ခမ်း လေးစူကာချစ်စနိုး အမူအရာ လေးဖြင့်ပြောလေသည်ညနေလောက်ကျတော့ သူတို့ တောင်ကြီးသို့လာခဲ့ရာညပိုင်းလောက်ရောက်တော့ နန်းနန်း၏အမျိုးများအိမ်သို့ရောက်လာခဲ့ကြလေသည် နောက်နေ့ ကျတော့ ပင်းတယကိုသူတို့သွားကြလေသည် ညနေလောက်ကျတော့ အိမ်ပြန် လမ်းတွင် နန်းနန်း၏ အမက ငါတို့ ၁နှစ်မှ၁ခါလောက်တွေ့ရတာဘီယာဝယ်ပြီး အိမ်မှာ သောက်ကြရအောင်ဟုဆိုကာဘီယာနှင့်စားစရာများ ဝယ်ကာ အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြပါသည်
သူတို့သောက်စားကြပီး မူးကာ သူ့အခန်းကိုယ့်အခန်း များသို့ဝင်လာခဲ့လိုက်ကြသည်နန်းနန်းနှင့်ရဲရဲက၂ယောက်တခန်း သူမသည် နဂိုအသားဖြူသူဆိုတော့ ဘီယာသောက်ထားသော အရှိန်နှင့် မျက်နှာလေးသည် နီမြန်းလျက်ရှိနေသည် အခန်းတခါးပိတ်ခါ နန်းနန်းကသူမဝတ်ထားသောမိန်းမဝတ် ဂျင်းစကင်အောက်ရှူးဘောင်းဘီအရှည်အားသူမ မူးနေ သဖြင့် သူ့ကိုချွတ်ခိုင်းသည် ရဲရဲ နန်းနန်း ကိုကူပြီးချွတ်ပေးအုံး ချွတ်ပေးလိုက်ပီး သူမ၏ တီရှပ်အင်းကျီနှင့် ဘရာစီယာ ကိုလည်း ချွတ်ပေးလိုက်သည်ပင်တီလေးတထည်သာ သူမကိုယ်ပေါ်တွင်ရှိတော့သည်ပင်တီကိုပါချွတ်ပီး သူ့ ဘောင်းဘီနှင့် အင်းကျီကိုပါချွတ်၍ ကုတင်ပေါ်တွင် စောင်တထည်ထဲ ၂ ယောက်အတူခြုံကာ အိပ်လိုက်ကြသည် မိုးလင်းခါနီးကျတော့ သူနိုးလာသည်နန်းနန်းကတော့ တစောင်းလေးအိပ်နေရာ သူလည်းလီးတောင့်လာကာ သူမ၏ အဖုတ်ထဲ သို့ လီးဖြင့်တစောင်းကွေးကာလိုးနေလိုက်သည် ခဏကြာတော့ သူမနိုးလာသည်သူ့ဘက်သို့ သူမဖင်ကြီးအား ပစ်ပေး၍ သူလည်း၃၀မိနစ်ကျော်လောက်လိုးပီး သူကော သူမပါကာမပန်းတိုင်သို့ တက်လှမ်းရောက်ရှိသွားကြလေသည် တောင်ကြီးမှာ ၁၀ ရက်လောက်နေပီး သူတို့ အိမ်သို့
ပြန်လာခဲ့ကြလေသည်အိမ်ရောက်ပီး နန်းနန်းနှင့် သူခရီးပန်းလာသောကြောင့်အနားယူလိုက်ကြသည်ညနေဘက်ကျတော့ သူမက သူ့အခန်းသို့ ရောက်လာပီး သူမအဝတ်စားများနှင့် သူအဝတ်စားများချွတ်ပစ်ပီးနန်းနန်းကသူမပါးစပ်လေးဖြင့် သူ့လီးကြီးအား လွေပေးနေလေသည် သူမကို ကုတင်ပေါ်တွင် လေးဘက်ကုန်းစေပီး နောက်မှူသူမအဖုတ်တွင်းသို့ သူလီးကြီးဖြင့် တဖုန်းဖုန်းဆောင့်လိုးနေလိုက်သည်ဘလွတ် ဘွတ် ပလောက် ပလောက် ဖွတ် စွိ ဖတ် ….အ ကောင်းတယ် ဆောင့်လိုး ရဲရဲ နန်းနန်း ကို ဆောင့်လိုးပေး အား အသူလည်း ၁၅ မိနစ်လောက်ဆောင်လိုးလိုက်ရာအား နန်းနန်း ပီးပြီ ရဲရဲ သူလည်း မကြာခင် ပြီးချင်လာအ နန်းနန်း ရဲရဲ လည်း ပီးတော့မယ်ဟုပြောပီးအဖုတ်ထဲမှ သူ့လီးကြီးအား ထုတ်ကာ သူမပါးထဲထဲ့ပေးလိုက်ရာ စုပ်ပေးနေပီးသူလရေများအားသူမပါးစပ်ထဲပန်ထဲ့ကာပြီးသွားလေသည်အား ရှီး ကောင်းလိုက်တာ နန်းနန်းရယ် ပြီးပါပြီ။
မေရှင်းအခန်း၌ အိပ်ပျော်သွားသော ကိုကို